Ku Darso 2-daas Qodob Dhammaan Boostadaada, Bogaggaaguna Wuxuu Ku Qarxi Doonaa Caannimada | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 2, 2014 Khamiis, Janaayo 2, 2014 Douglas Karr
Ma aragtay wixii aan halkaas ku qabtay? Wadar, cheesy, ka-gooldhalinta linkbait… Wayna shaqeysay Waad joogtaa sababtoo ah waxaan ku qoray cinwaanka boostada qaab qaab gaar ah. Kani waa istaraatiijiyad muhiim ah oo ku saabsan goobaha sida Upworthy iyo Buzzfeed waxayna soo jiiteen malaayiin akhristayaal ah iyagoo ku hagaajinaya cinwaannadooda boostada oo kaliya leh 2 cunsur oo muhiim ah ios xiisaha iyo shucuurta.
Xiisaha - adoo sheegaya 2 shay, maskaxdaadu waxay bilaabaysaa inay yaabantahay oo duufsashada aad riixdo waa mid aad u badan.
qiiro - Waxaan si taxaddar leh u isticmaalay ereyga caan cinwaanka boostada. Yaan dooneynin in boggooda uu caan noqdo?
Kuwani 2 cunsur ee a cinwaanka boostada waa kuwo si qosol leh u guuleysta laakiin waa inaad u isticmaashaa taxaddar aad u daran. Durba waan ka daalay bogagga aan kor ku xusay. In kasta oo ay had iyo jeer leeyihiin nuxur aan la diidi karin, haddana wax qiimo ah kuma arko iyaga oo badiyaa lumiya daqiiqado qiimo leh oo aan ku dhex baaro sawirada bisadaha ama daawashada sheekooyinka ilmada ka qubanaya Xusuusin: Kuma xiriirin bogaggaas anigoo ka baqaya inaan dareenkaaga kaa waayo 45-ka daqiiqo ee soo socota.
Taasi macnaheedu maahan inaad ka fogaato taatikada? Maya… laakiin waxaan u maleynayaa inaad u baahan tahay inaad ka celiso cinwaannada inay kor maraan oo aad gaarsiiso wixii aad sheegtay oo keliya. Waxaan ogaadey in boggag badan oo adeegsada xeeladahaas aysan si fudud ula kulmin rajada cinwaanka. Hoos kadhegayso xoogaa qanjirro ah waxaadna ka heli doontaa istiraatiijiyad fantastik ah.
Marka… aan dhahno waxaad tahay sawir qaade waxaadna leedahay qoraal ku saabsan 8 talo oo ku saabsan sawir qaadista. Halkii laga heli lahaa heerka caadiga ah ' Tilmaamaha 8 post blog, waad qori kartaa qoraal sida Samee 8-daan Talaabo ee Fudud Kahor Intaadan Qaadin Sawirkaaga Xiga waxaadna layaabi doontaa natiijooyinka. Xiisaha (waa maxay tillaabooyinka?) Iyo qiiro (layaab!).
Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn wax sharrax u ah sida sawir qaadista. Malaha waxay hubineysaa taayiradaada! Waxaad qori laheyd talooyin ka xirfadle makaanikada. Halkii… Sirta Xirfad Leh ee Kordhinta Nolosha Taayir La'aanta Amniga. Boostadu wali waxay noqon kartaa mid ku saabsan ilaalinta cadaadiska hawada iyo wareejinta taayiradaada you laakiin waxaad u beddeli kartaa wadahadalka adoo ku biiraya xiisaha (qarsoodiga?) Iyo shucuurta (amniga!).
Hadalkayga ha u qaadan. U dhiib tallaal taxanahaaga soo socda ee qoraalada baloogyada. Haddii aad kordhin karto qiimaha gujinaya, maqaalladaada ayaa la arki doonaa inbadan, inbadan ayaa la wadaagi doonaa, waxayna u horseedi doonaan ganacsi dheeri ah. Tag qarxin caan!
Tags: cajiibdareenkaqor cinwaanada boostadaQoraalka
Doug, waa runtaa in isku-xidhka isku xidhka ahi “shaqeeyay” macnaha aan u joogo halkan. Waan aqriyay qoraalkaaga. Laakiin ma aanan u aqrin cinwaanka awgiis - waxaan u aqriyay maxaa yeelay waan aqaannay qoraaga waxaanan u maleeyay inaad awoodi karto inaad ka dhabeyso balanqaadkaaga.
Waxaad ku helaysaan waxyar taraafikada habkan, waxaadna iga helaysaan xoogaa hawl ah qaab faallo ah, laakiin runtii waan dareemayaa yar ku hawlan astaantaada xilligan. Ma doonayo inaan la wadaago qoraalkan. Ma dareemayo inay igu siisay wax aanan horay u aqoon.
Laakiin taasi waxay noqon kartaa yoolkaaga. Waxaan u maleynayaa in bogagga sida Upworthy iyo Buzzfeed ay isku dayayaan inay helaan dad badan oo dad ah oo ay gujiyaan maxaa yeelay iyagu ma xiiseeyaan ka-qaybgalka heerka sare ah. Waxay raadinayaan aragti ku saabsan xayeysiintooda iyo wacyigalinta sumcadda, maahan dadka soo saara ixtiraamka khibradooda iyo warbixin qoto dheer.
Taladaadu sax ma tahay? Waxay kuxirantahay yoolalka suuqleyda. Haddii aad rabto dad ku qanacsan "sirta" wareejinta taayiradaada ama "aad ula yaabtay" talooyinka ah in la isticmaalo xukunka saddex-daloolow, markaa malaha qaaciddadan ayaa ah mid mudan. Laakiin waan ogahay macmiilkan, waxaan isku dayayaa in AANAN gujin linkbait. Kaliya waxaan halkaan u joogaa sababtoo ah shaqsi ahaan waan ku aqaan. Qof kasta oo kale oo cinwaankan leh waa la iska indha tiri lahaa.
Dib-u-celin naxdin leh @robbyslaughter: disqus - waxaadna ogaan doontaa inaan gebi ahaanba oggolahay. Xaqiiqdii kuma istiraatiijiyad istiraatiijiyaddayda boggeyga oo wuxuu igu diidayaa baloogyada kale. Waxaan rabaa inaan qoro cinwaanno dheeri ah oo wanaagsan, in kastoo, anigoon dhaafin anigoo dadka khayaameeya. In kasta oo istaraatiijiyaddan gaarka ahi ay ka sarreyso meesha ugu sarreysa - waxaan u maleynayaa in ka-faa'iideysiga xiisaha iyo u-qaadashada shucuurtu ay fure u tahay… iyada oo aan lahayn isku-xirnaanta cheesy Waad ku mahadsantahay bilaabida wada hadal wanaagsan!